AbakwaSamsung basebenza kumahedisethi wangempela wangempela ezimele | Izindaba zamagajethi
Njengamanje abakwaSamsung banikeza amakhasimende abo izibuko ezingokoqobo lapho kufanele sengeze khona iSamsung yethu ukujabulela okuqukethwe okutholakala njengamanje kuma-degree angama-360 njengakumidlalo esekelayo namuhla. Kepha kubonakala kunjalo Akuyona ukuphela kwephrojekthi inkampani ebisebenza kuyo eminyakeni edlule.
I-Visual Camp, inkampani ekhethekile ekwenzeni okuqukethwe okungokoqobo nokungathandwa kwabathelisi esikubona, ishicilele i-athikili emayelana nesigqoko seqiniso sangempela esivela enkampanini yaseKorea iSamsung, isigqoko sokuzivikela esethulwe ngokudlula ngasese eqenjini elincane kakhulu labantu ku-MWC edlule ebanjelwe eBarcelona.
Lesi sigqoko sokuzivikela esibizwa nge-Samsung ExynosVR III, kusobala ukuthi sizoba yisizukulwane sesithathu sedivayisi esingakaze sithengiswe nganoma yisiphi isikhathi, kodwa lapho inkampani yaseKorea itshale imali nesikhathi. Ngaphakathi kwalesi sigcina sangempela sangempela sithola iprosesa ye-nanometer eyi-10 ne-processor ye-Mali G71. Ngokwethiyori, lezi zibuko zizokwazi ukuphatha izikrini ezimbili ngesilinganiso sokuqabula esingu-90 Hz no Isixazululo se-WQHD + (2,560 x 1,440) noma isibonisi sesinqumo esingu-4k esinezinga lokuvuselela i-75Hz, ngoba asinayo imininingwane eyengeziwe uma ingaphakathi liyisikrini esisodwa noma ezimbili.
Ngalesi sikhathi kubonakala sengathi i-Samsung izofika sekwedlule isikhathi emakethe, lapho esivele sithola khona i-Oculus Rift ne-HTC Vive, kepha ifuna ukukwenza ngomnyango wangaphambili, njengoba i-Apple ivame ukwenza eminyakeni yamuva, lapho kade kwephuzile kepha yethula imikhiqizo eyindilinga kakhulu nalapho singazitholi kalula izici ezingezinhle.
Kuzofanele silinde ukubona ukuthi ngabe abakwaSamsung bayethula ngokusemthethweni lehedisethi engokoqobo ebonakalayo, okuthile okuthi ungenza kanye nokwethulwa kwe-Galaxy Note 8, ehlelelwe maphakathi no-Agasti. Kuyacaca ukuthi lo mkhakha ubaluleke kakhulu ezinkampanini eziningi zobuchwepheshe, manje njengoba imikhiqizo isiqalile ukwehlisa izindleko zokukhiqizwa kwezinto futhi ingafinyelela inani elikhulu labantu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ubuchwepheshe » Iqiniso langempela » AbakwaSamsung basebenza kumahedisethi wangempela we-standalone